Ny kitapo USB vaovao manara-penitra ny tratran'ny kitapo mpitondra hafatra
Kitapo miendrika loko sy ny lamaody, ny akora nilona, ​​ny akora vita amin'ny nylon dia misy mampiavaka ny famoahan-drano, ny fitsinganana ary ny fanoherana ny ranomaso.
Kitapo an-tsofina vaovao voajanahary kitapo an-tsokosoko harona anaty diagonaly ivelany
Mavitrika sy kiraro mampiavaka ny tontolo iainana avo lenta amin'ny kalitao, porofo amin'ny rano, matevina ary miorim-paka. Namboarina kitapo lehibe misy entana sy kitapo fiasa marobe.
Tsy hoe mahita izao tontolo izao, fa an-tongotra. Ny kitapo fitsangatsanganana faran'izay manaitaitra sy manaitaitra dia vita amin'ny alàlan'ny lamba tsy mientana amin'ny kalitao avo lenta, izay fitafy mpiaro, avo lentana, tsara rivotra ary mahazo aina. Ny famolavola fahaiza-manao lehibe dia afaka mitahiry entana marobe toy ny akanjo manokana, solosaina, finday, elo, sns, ary ilay kitapo fika aman-tsary eo anoloana dia afaka mitahiry finday, solosaina solosaina, rojo fanalahidy ary entana hafa mora ampiasaina any na inona na inona fotoana.
Miaraka amin'ny famolavolana marobe, io kitapo laptopie io dia manana efitrano lehibe lehibe izay afaka mameno ny solosaina finday ambanin'ny 15.6 santimetatra, ary koa ireo boky, akanjo, ary zavatra hafa isan'andro.
Item No. ywssd-002 Material Oxford lamba fanokafana Fomba fanokafana Fitaovana rano tsy mavesatra, mifoka rivotra, miakanjo, manafintohina azo tanterahina momba ny lahy sy ny vavy tsy miandany / lehilahy sy vehivavy. suture Loko tsotra style-Round Mouth-Grey, Fomba tsotra-Round Mouth-Pink, Fitiavana tsotra-Round Mouth-Blue, Simple Style-Round Mouth-Black Size 1 ...